अन्तिम पटक हात्तिपाईलेको औषधी ख्वाइँदै
फागुन १ पर्वत । पर्वतमा हात्तिपाईले विरुद्धको औषधी अन्तिम पटक ख्वाउने भएको छ । अन्तिम पटक आउँदो फागुन १२,१३ र १४ गते औषधी ख्वाएर हात्तिपाईलेको औषधी ख्वाउने अभियान रोकिने भएको हो । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत जिल्लामा २०६९ सालदेखि हात्तिपाईले औषधी ख्वाउने अभियान थालिएको हो । ५ वर्षसम्म लगातार औषधी ख्वाईएको र अव अन्तिम पटक गर्दा ६ वर्षसम्म लगातार औषधी ख्वाउने मात्रा पुरा हुने भएको अभियान रोक्न लागेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा. वुद्धिवहादुर थापाले जानकारी दिए ।
लगातार ६ वर्षसम्म औषधी खाएमा हात्तिपाईले रोग नलाग्ने र रोग लागेका पनि निको हुने विभिन्न अन्तराष्ट्रिय अनुभव तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत यहि मान्यता राख्ने भएकाले अभियान रोक्न लागिएको डा. थापाले बताए । तर औषधी खाए पनि संक्रमित लामखुट्टेले टोकेमा रोग सर्ने संभवना भने रहने थापाले वताए । सोमवार पत्रकार सम्मेलन गरेर जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले अन्तिम चरणमा अ‍ौषधी ख्वाउन लागेको जानकारी गराएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा जिल्लामा हात्तिपाईले रोग विरुद्धको औषधीको अन्तिम चरणमा आइपुग्दा भएका प्रगति र अन्तिम अभियानको बारेमा जानकारी दिइएको छ ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका फोकल पर्सन दिपक भण्डारीले जिल्लामा हात्तिपाईले रोगी एकाध देखिएपनि रोगवाट संक्रमित भएर अस्पतालमा कोहि पनि नआएको जानकारी दिए । यसवर्ष १ लाख ३७ हजार ५ सय ७६ जनालाई हात्तिपाईले विरुद्धको औषधी ख्वाउने तयारी छ । उक्त संख्याका सबैजनाले ५ वर्षसम्म औषधी सेवन गरिसकेका छन् भने यसवर्ष ख्वाउँदा ६ वर्षसम्म उनीहरुले लगातार औषधी खानेछन् । ‘कसैले औषधी लगेर पनि खाएनन होला तर हामीले ६ वर्ष औषधी ख्वाएको आधारमा अभियान रोक्दैछौँ,’ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत सजिना महर्जनले भनिन्,‘ औषधी लगेका सबैले खाए भन्ने हाम्रो अनुमान हो ।’
आउँदो फागुन १२,१३ र १४ गते जिल्लाका २ नगरपालिका र छ गाउँपालिकामा औषधी ख्वाउँदैछ । औषधी ख्वाउन १ हजार ५० जना सवयंसेवक, ६२ जना स्वास्थ्यकर्मी, २५ जना सुपरभाईजर परिचालन हुनेछन् । यसपालीको अभियानमा ६० लाख ९ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने स्वास्थ्य कार्यालयले जनायो ।
औषधी ख्वाउने अभियान रोकिएपनि हात्तिपाईले रोकथामका अन्य विकल्पहरु नरोकिने फोकल पर्सन दिपक भण्डारीले बताए । ‘हात्तिपाईले संक्रमित लेस देन एक प्रतिशतमा झरेपछि हामीले अभियान रोक्न लागेका हौँ,’ भण्डारीले भने,‘रोग लाग्ने कारक तत्वको रुपमा रहेको लामखुट्टेको रोकथाम गर्ने कार्यक्रम जारी रहनेछ ।’ उनले लामखुट्टे रोकथामका लागि औषधी छर्किने र सुपानेट झुल वितरण गरिने बताए । नेपाल सरकारले औषधी ख्वाउने कार्यक्रम रोकिएपछि अव के गर्ने भन्ने कुनै नीति तर्जुमा गर्छ कि गर्दैन त्यो भने केन्द्रिय नीतिमा भर पर्ने उनले बताए ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार यो रोग विश्वका ८३ मुलुकमा पाइएको छ । हाल १२ करोड मानिसहरु यो रोगवाट संक्रमित रहेका छन् । यसमध्ये करिव २ करोडमा हात्तिपाईले र २ करोडलाई अण्डकोष र यौनाङग सुन्निएको पाइएको छ । वाँकि करिव ७ करोड मानिसहरुमा साधारण लक्षणहरु देखिएका छन् । नेपालका ७७ जिल्ला मध्ये ६१ जिल्लामा यो रोगको असर देखिएकाले औषधी ख्वाउने अभियान चलिरहेको छ । यसवर्ष २१ जिल्लामा अभियान पुरा हुने जनाइएको छ ।